Arabia Saodita – Sady Voatifitra Ianao no Mbola Voasazy Vokatr’Izany · Global Voices teny Malagasy
Arabia Saodita – Sady Voatifitra Ianao no Mbola Voasazy Vokatr'Izany
Voadika ny 27 Septambra 2013 15:11 GMT
Namoaka ny didiny ny Fitsarana Heloka Bevava Saodiana, ho an'ireo tovolahy Qatifi, ka 16 volana hatramin'ny efatra taona izany. Ny lehilahy iray, Jalal Al-Qattan, voatifitry ny mpitandro filaminana teo amin'ny ambavafony nandritra ny hetsi-panoherana iray, ary teny am-pihazakazahana nandositra fisamborana, dia voasazy telo taona. Ny fitsaràna, ny Talata (17 Septambra), no faha-efatra sy fihainoana farany tamin'ity andiany ity, izay efa tany amin'ny fihetsiketsehana iray nitranga ny harivan'ny 8 Jolay 2012 tany.
Tamin'io alina io, isan'ireo tanora marobe nandray anjara hanoherana ny fisamborana ilay Shiita Sheikh Nimer Al-Nime mpitondra fivavahana i Al-Qattan. Olona roa no maty maritiora iny alina iny (Sayyed Akbar Al-Shakhouri sy Sayyed Mohammed Al-Felfel), ary voatifitra teo amin'ny ambavafony i Jalal Al-Qattan. Nentina taminà trano iray tao Awwamiya izy, ka tao no nezahan'ny sasany nampijanonana ny rà nijininika taminy. Nisy olona niantso an'i Ali rahalahin'i Jalal, izay tonga naka an'i Jalal hody tany an-tranon-dry zareo. Niezaka nandresy lahatra an'i Jalal ny fianakaviany mba hanatona toeram-pitsaboana, saingy nolaviny hatrany izany noho ny tahotra ny ho voasambotra. Mpikatroka mafàna fo roa tamin'ireo 23 “olona nokarohana” – ny iray dia i Morsi Al-Rebh no voatifitra ka maty tao Awwamiya tamin'ny Jona lasa teo – nanaraka ny zava-nanjo an'i Jalal sy niezaka ny nitady fanampiana ara-pitsaboana ho azy. Nahita mpitsabo mpanampy ry zareo, saingy io no nilaza tamin'izy ireo fa saropady be ny mahazo azy ary nila mpandidy izy. Ny iray tamin'ireo mpikatroka mafàna fo no nanolo-tena hitady mpandidy, saingy tsy nahita izy na iray aza ka dia nitondra mpitsabo mpanampy iray hafa indray, izay mbola nitovy tamin'ny teo aloha ihany ny torohevitra naveriny nomeny azy ireo. Ny fianakaviana no mbola niezaka indray handresy lahatra an'i Jalal mba hiatrika fitsaboana any amin'ny hopitaly, saingy nolaviny. Noho izany dia nanolo-kevitra ny hitondra azy handositra ny fireneny ny dadatoany. Ny andro nanaraka an'io, voasambotra i Jalal Al-Qattan, Ali rahalahiny, ary ny dadatoany Mohammed Al-Mislab sy ny zaodahiny Hussain Al-Areef tao amin'ny seranan'i Khafji, teny an-dàlan-dry zareo ho any Kaoety.
Isan'ny vesatra niampangàna azy ireo ny : tsy fanehoana fankatoavana ny mpitondra, tsy fitorohana ireo mpanao hetsi-panoherana, tsy fitorohana ireo olona roa nikasa ny hitondra an'i Jalal any aminà trano azo antoka mba hotsaboina, tsy fitorohana ireo mpitsabo mpanampy niezaka ny hanampy an'i Jalal ivelan'ny toerana natao hitsaboana, i Jalal koa dia nampangaina ho tsy nanaja ny ray aman-dreniny satria nanao izay hampidi-doza ny tenany tamin'ny nandavany ny toro-hevitr'izy ireo hanatona toeram-pitsaboana. Jalal sy ny dadatoany dia samy voaheloka noho ireo vesatra rehetra niampangàna azy ireo ary Jalal dia nahazo telo taona an-tranomaizina miampy fandraràna tsy hahazo mivezivezy mandritra ny telo taona, raha ny dadatoany kosa voasazy efatra taona an-tranomaizina sy tsy fahazoana mivezivezy mandritra ny efatra taona. Ali, rahalahin'i Jalal, dia voaheloka roa taona an-tranomaizina sy tsy fahafahana mivezivezy mandritra ny roa taona. Voasazy fotsiny ho nanandrana “hamoaka an-tsokosoko” ny rahalahiny kosa i Al-Areef zaodahiny raha tokony ho nitoroka azy tany amin'ny manam-pahefana. Voaheloka 16 volana an-tranomaizina sy 16 volana tsy mahazo mivezivezy izy .
Naneho hevitra momba ireo didim-pitsarana ny mpampiasa Twitter :
Aty Qatif, manana Jalal Al-Qattans marobe izahay izay tsy nandeha tany amin'ny hopitaly noho ny tahotra ny ho voasambotra sy hizaka ny nanjo an'i Jalal. Naleon'ny sasany mitondra kilema mba hisorohana ny figadràna.
Androany ny fitsaràna an'i Jalal Al-Qattan ilay notifirin'ny mpitandro filaminana.
Hafahafa! Ry zareo no nitifitra azy, avy eo manasazy azy telo taona an-tranomaizina.
Ato anatin'ny fanjakan'ny maha-olombelona, heloka bevava raràn'ny lalàna ny fitsaboana ny maratra, eny fa na dia havana faran'izay akaiky aza ilay maratra.